RASMI: Manchester City Oo Shaacisay Lambarrada Ay Xidhan Doonaan Saxeexyadii Cusbaa Ee Xagaagan & Xiddig Dhaxlay Lambarkii David Silva - Gool24.Net
RASMI: Manchester City Oo Shaacisay Lambarrada Ay Xidhan Doonaan Saxeexyadii Cusbaa Ee Xagaagan & Xiddig Dhaxlay Lambarkii David Silva
August 29, 2020 Abdiwahab Ahmed Abeeye
Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa si rasmi ah u shaacisay lambarrada ay xidhan doonaan labadii ciyaartoy ee ay xagaagan lasoo saxeexdeen ee Nathan Ake iyo Ferran Torres, kuwaas oo ay kala soo wareegeen naadiyada Bournemouth iyo Valencia.
Man City waxay toddobaadyo ka hor sii macasalaamaysay halyeygoodii khadka dhexe ee David Silva oo ku biiray naadiga reer Spain ee Real Sociedad kaddib muddo 10 sannadood ah oo uu Etihad Stadium rukun adag ka ahaa.
Tababare Pep Guardiola ayaa fursad u helay in lambarkii uu banneeyey Silva ee No.21 uu u geliyo mid ka mid ah saxeexyada cusub ee xagaagan ay lasoo wareegeen.
Difaaca reer Netherlands ee Nathank Ake ayay Manchester City xaqiijisay inuu xidhan doono lambarkii ay iskaga dambeeyeen Joleon Lescott iyo Michael Johnson ee sannadaha badan bannaanaa ee No.6.
Ake oo ay £41 milyan oo Gini Man City kagala soo wareegtay Bournemouth ayaa khadka difaaca la adkayn doona Laporte, laakiin waxa uu tartan adag kala kulmayaa Stones, Fernandinho iyo Otamendi, inkasta oo ruug-caddaaga reer Brazil uu khadka dhexe booskiisa rasmiga ahi yahay.
Laacibka reer Spain ee Ferran Torres ayaa nasiib u yeeshay inuu dhaxlo No.21 oo uu banneeyey David Silva, waxaana fuulaya culays weyn oo ah inuu soo bandhigo ciyaar la mid ah tii lagu yaqaanay ruug-caddaaga uu beddalay.
Manchester City ayaa sidoo kale rajaynaysa inay lasoo saxeexan doonto Kalidou Koulibaly oo ay lacag badan la dul-taagan yihiin iyo Lionel Messi oo la sheegayo inay telefoonka ku wada hadleen Pep Guardiola.